८ साउन , २०७८
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका थिए– अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ । उनको यस भनाइ सोही पार्टीका केन्द्रीय परिषद् अध्यक्ष महन्थ ठाकुरमा लागू भएको छ । संभवत डा. भट्टराईले उक्त भनाई आफ्नै पार्टीका तर ओली पक्षमा मिल्न गएका महन्थ, बाबुराम तर्फ नै लक्षित गरेर भनेका थिए ।
महन्थ ठाकुर काँग्रेसका पुराना नेता हुन् । काँग्रेसमै रहिरहेको भए संभवत उनी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्थे । किन भने काँग्रेसमा मधेशका नेतामध्य उनी पहिलो रोजाईका नेता थिए । उनले काँग्रेस छोडेर तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन हिडेपछि पहिलो राष्ट्रपति बन्ने भाग्य डा. रामबहरण यादवकोमा आईपुगेको हो ।
तत्कालिन माओवादीले पहिलो राष्ट्रपतिका लागि रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो । विपक्षमा रहेको काँग्रेस, एमाले त्यसको विपक्षमा उभिए । मधेशकेन्द्रीत दलहरु तमलोपा र फोरमको मत निर्णायक बन्यो । त्यतिबेलाको बलियो माओवादीका उम्मेदवार विरुद्ध विपक्षी गठवन्धनको उम्मेदवारले जित्ने संभावना क्षिण थियो । त्यसैले तत्कालिन काँग्रेससभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले रामबरण यादवको नाम अघि सारे । जतिबेला ठाकुरले काँग्रेस छाडिसकेका थिए ।
फलस्वरुपम मधेशवादी दलहरुको मत पनि रामराजाप्रसाद ंिसह हैन रामबरण यादवको पक्षमा पर्यो र उनी देशको पहिलो राष्ट्रपति बने । त्यतिबेला धेरैले भनेका थिए, जित्ने पक्का भएको भए काँग्रेले यादवलाई उम्मेदवार नै बनाउने थिएन । हार्ने देखेर सद्भावनाको भोट तान्न मधेशी मुलका यादव उठाएको हो ।
महन्थ ठाकुरले मधेसमा भएका धेरै साना दलहरूलाई मिलाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनाएका थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएपछि आत्तिएर ठाकुरको पार्टी डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग मिलेको थियो । ठाकुरका सामू निकै ठूलो अवसर पनि आएको थियो । ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
यो पनि....नेकपा फुट्नेगरि आदेश दिने न्यायाधीश रेग्मीले जसपा विवादलाई कसरी हेर्लान ?
तर ठाकुर पक्ष भने ओलीले दिएको ललिपलमा भुलिएर संसद् विघटनको पक्षमा उभियो । संसद् विघटनको पक्षमा उभिनुभन्दा अघि ठाकुरलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसपाकै बाबुराम र उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री बनाउन राजी भएका मात्रै थिएनन् नाम समेत प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनी ओलीसँग झन्झन् नजिकिँदै गए र उनको जालोमा फसेपछि अहिले ‘घर न घाट’को अवस्थामा पुगेका छन् ।
ओलीलाई साथ दिँदा आफ्नै सांसद पद गुमाउँदै महन्थ
बहुदलको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि गत वैशाखमा ओली ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले विश्वासको मत आर्जन गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहेका थिए । सो पार्टीका ठाकुर पक्ष पनि ओलीसँग नजिकिएको थियो । जपपाभित्र किचलो भएपछि ओलीलाई विश्वासको मत दिने नदिने भन्नेमा पार्टी ह्वीप नलगाउने निर्णय भएको थियो । गत ३० वैशाखमा जसपामा ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका १९ सांसद्लाई ओलीको निर्देशनमा एमाले सांसद् महेश बस्नेतले भक्तपुरको सिपाडोलस्थित डोलेश्वर रिसोर्टमा राखेका थिए ।
ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गर्दा ठाकुर पक्षले खुलेर साथ दिएको मात्रै थिएन कामचलाउस सकारमा महतोको नेतृत्वमा सरकरमै सामेल भएको थियो तर उनीहरूको मन्त्री पद भने सर्वोच्चले १९ दिनमै खारेज गरिदिएको थियो । भने अहिले सर्वोच्चले बालुवाटारमा रहेको ओलीलाई बालकोट पुर्‍याउने र वुढानिलकण्ठमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटार पठाउने गरी फैसला गरेको ठाकुर पक्ष झन् संकटमा फसेको हो । सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरेपछि भने ३ साउनमा विश्वासको मत समेत दिएको छ । ‘संसद् विघटन भए पनि ठीक, पुनस्र्थापना भए पनि ठीक’ भन्ने ठाकुर पक्षको आलोचना भने भइहेको छ । अहिले भने ठाकुर आफूले मात्रै होइन उनीसँगै उपेन्द्र पक्षमा नआउने जति सबैले पार्टी सदस्यसँगै सांसद् पद पनि गुमाउनु पर्ने भएको छ ।
ओलीको साथ लाग्दा राजनीतिक एजेन्डासमेत गुमाएको ठाकुर पक्षलाई अहिले जताततै अनिष्ट मात्रै आइलागेको छ । जसपाको आधिकारिकता विवादबारे भने निर्वाचन आयोगले ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाबाट बहुमत खोज्न भनेको छ । जसका लागि आयोगले ११ साउनमा सक्कली नागरिकतासहित भौतिकरुपमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ । त्यस दिन जसले बहुमत पुर्‍याउछ त्यसैको पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह र पार्टीका चल अचल सबै सम्पत्ति हुनेछ । भने बहुमत पुर्‍याउन नसक्नेले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने छ । अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा बाबुराम– उपेन्द्र समूह अत्यधिक बहुमतमा रहेको देखिन्छ ।
जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीसभामा अहिले ५० जना रहेका छन् । जसमध्येबाट बहुमत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । बाबुराम– उपेन्द्र पक्षले पार्टी आधिकारिकता दाबी गर्दै यसअघि नै आयोगमा ३१ जना सदस्यको नाम बुझाएको थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेमा ३० (दुई निलम्बित बाहेक) मध्ये १२ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । भने संसद्मा विश्वासको मत दिने बेलामा बाबुराम– उपेन्द्र पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा २० सांसद् रहेका थिए । त्यतिबेला नै अल्पमतमा रहेको ठाकुर पक्षले भने बाबुराम– उपेन्द्रले गर्ने निर्णयमा साथ दिएको थियो ।
कुन पक्षमा कति सदस्य ?
अहिलेको अंकगणितमा कुनै फेरबदल नआएमा जसपा बाबुराम– उपेन्द्रले पाउने देखिन्छ । अहिले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाका ५१ मध्ये ५० जनाबाट बहुमत खोज्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णयसमेत गरेको छ । जुन संख्याबाट बहुमत खोज्दा बाबुराम– उपेन्द्र पक्षमा ३३ जना रहेको एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सभाका सदस्यले बताए । उनले यसअघि आयोगमा बुझाएको ३१ मा ठाकुर पक्षबाट थप २ सदस्य थपिएको बताए । यो संख्या भनेको कुल केन्द्रीय कार्यकारिणीसभाको ६६ प्रतिशत हुन आउछ । यसका साथै देउवालाई विश्वासको मत दिने पक्षमा बाबुराम– उपेन्द्रसँग २० सांसद थिए । अहिले २ जना सांसदले पनि ठाकुरको साथ छाडेर बाबुराम– उपेन्द्र पक्षमा आएको ति सदस्यले जानकारी दिए ।
यो संख्या जसपाको कुल ३० (दुई निलम्बित बाहेक) सांसद्को ७३ प्रतिशत हुन आउछ । यही संख्या निर्वाचन आयोगमा कायम रहे ठाकुर पक्षको न पार्टी रहन्छ न सांसद् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० /४० प्रतिशत पुर्‍याएर मात्रै नयाँ पार्टी दर्ता गर्न पाइन्छ । यदि उनीहरूले सो संख्या पुर्‍याउन नसके पार्टी र सांसद् दुवै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । ठाकुर पक्षलाई भने बाबुराम– उपेन्द्रको साथमा रहेका मध्ये कार्यकारिणी सदस्यबाट ६ प्रतिशत र संसदीय दलमा १३ प्रतिशत सांसद संख्या थपेको खण्डमा सांसद् पद भने जोगिन्छ ।
जसपा उपेन्द्र यादवको पक्षमा गयो
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले जसपा यादवको पक्षमा रहेको बताए । जसपाको कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा बहुमत देखिएको बताए । उनले भने,‘राजनीतिक हिसावले हेर्दा जसपाको कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्ष बलियो देखियो । पार्टी उपेन्द्रजीको कब्जामा गयो । महन्थ राजेन्द्रजीहरू पराजित हुनुभयो । उहाँको हातबाट पार्टी निस्कियो । प्राविधि हिसावले हेर्दा भोलि पार्टी दर्ता गर्न दिने लगायतका कामहरू पनि बाँकी नै छ त्यसबारे यसै भन्न सकिँदैन तर जसपा भने उपेन्द्रजीको पक्षमा गयो ।’ उनले अघि भने,‘जसपा उपेन्द्रजीको पक्षमा जानुमा पूर्व राजपाकै नेताहरूको हात छ ।
नवलकिशोर लगायत उपेन्द्रजीकोमा गए । जसपाका अगाडि दुवै तिर सत्ता थियो । देउवाको तिर गए पनि सत्ता र ओलीको तिर गए पनि सत्ता थियो । जसपाका यही विषयमा विवाद भयो– ओलीसँग जाने कि देउवासँग भनेर । महन्थ पक्ष आफ्ना मुद्दामा जो सकारात्कम हुन्छ, तत्काल पुरा गर्छु भन्छ उसैको पक्षमा जाने र उपेन्द्र पक्ष ओलीसँग जानै हुन्न भन्नेमा थिए र विवाद भएको थियो । त्यतिबेला महन्थहरु जानुभयो किनकि उहाँहरूलाई जाने आधार पनि थियो ।
ओली सरकारले १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लियो, नागरिकता अध्यादेश ल्यायो, रेशम चौधरीमाथिको प्रशासनिक जटिलता फुकाउने आश्वासा दिएको थियो, संविधान संशोधनका लागि कायर्दल बनाइएको थियो । यि चार आधारमा ओलीसँग महन्थ र राजेन्द्रीहरू जान खोज्नुभयो ।
उपेन्द्रजीले यसमा फरक मत राख्नुभयो । महन्थजी कमजोर र उपेन्द्रजी हावी हुनुमा प्रदेश २ को राजनीति पनि हो । प्रदेश २ मा उपेन्द्रजी पक्षको नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यहाँ राजपा हुँदा जो जो मन्त्री थिए उनीहरूले आफ्नो पद सुरक्षीत राख्न महन्थजीको साथ छाडे । पूर्व राजपाबाट मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह उपेन्द्रजीको पक्षमा रहनुभयो । यसले पनि महन्थजीहरूलाई बढी घाटा गर्‍यो ।’
शुक्रबार ८, साउन २०७८ १६:४५:४४ मा प्रकाशित